Mukulaasha Mucjisada Ah Ee Achilles Oo Saadaalisay Cidda Guuleysan Doonta France & Belgium Iyo Sidii Ay U Rumoobeen Ciyaarihii Hore Ee Ay Sii Sheegtay – GOOL24.NET
Mukulaasha Mucjisada Ah Ee Achilles Oo Saadaalisay Cidda Guuleysan Doonta France & Belgium Iyo Sidii Ay U Rumoobeen Ciyaarihii Hore Ee Ay Sii Sheegtay
July 10, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Mukulaasha weyn ee Achalles oo ku nool madxafka weyn ee lagu kaydiyo dhaqanka ee ku yaalla magaalada St. Peresburg ayaa sannadkan noqotay mucjisada bixisa saadaasha Koobka Adduunka oo intooda badan kulamadii ay sii sheegtay cidda guuleysanaysa ay sideedii u dhacday.
Achalles oo ah bisad ama mukulaal ayaa hore u saadaaliyey ciyaarihii Russia iyo Saudi Arabia, Russia iyo Egypt, Iran iyo Morocco iyo waliba Brazil iyo Costa Rica, waxaanay dhamaantood ku dhamaadeen natiijadii bisadku sii sheegay.
Ciyaarta caawa ee semi-finalka ee aadka loo sugayo oo ay iskaga hor iman doonaan France iyo Belgium oo ka dhici doonta magaalada St Petersburg ayaa waxa garoonka tegi doona dad tiradoodu dhan tahay 64,500 qof, kuwaas oo goob joog u noqon doona ciyaartaas qiimaha leh oo dalka badiya uu tegi doona finalka.
Haddaba bisadda ama mukulaasha Achilles ayaa oo hore u saadaalisay lix ciyaarood oo dhamaantood rumoobay marka laga reebo hal kulan oo ahayd ciyaartii Nigiera iyo Argentina oo dhinaca Afrika ay guusha u doortay.
Bisaddu waxa ay saadaasha guusha siisay xulka qaranka France oo dhawr jeer oo loogu celiyey inay wax ka beddesho natiijadii hore iska daba martay halkii hore uun.
Qaabka saadaasha loo sameeyo ayaa ah in caano ama cunto ay jeceshahay loo dhigo laba meelood oo calanka labada dal ee wada ciyaaraya ay agyaallaan, waxaana guusha la siiyaa dalka ay ku noqnoqoto calankiisa.